Gaadiidka 3 GPS, dareenka koowaad - Geofumed
Mee, 2010 GPS / Qalabka, topografia
Waxaan horeyba u soo qaatey alaabta carruurtu ku ciyaarto, sanduuqa Toddobaadkiiba hal waxaanu sameyn doonaa tababar si aan u aragno sida ay u shaqeyso. Hadda, si dhib yar ayaan u arkay fiidiyowyada iyo qaar ka mid ah sifooyinkooda.
Tilmaamaha Qandaraaska 3.
Khadkaas oo kale, hore ayaa jiray, waxaana jiray ugu dambeyntii:
Khariidadda 'Mobile Map Pro', qurux wanaagsan oo ku socday waddanka Mareykanka $ 1,500, iyo in dib u habayn lagu sameeyo qodobada hoos ku xusan. Waxay noqon kartaa saldhig iyo sidoo kale rover. Waqti xaadirkan waa la joojinayaa; Waxay ahayd wax laga xumaado in kaadhku ahaa mid aan la xakamaynin markii uu bilowday, malaha fayraska, laga yaabo inuu qalad u geysto shaqaalaheeda.
Khariidadda CX Mobile, tani waa nooc korodhsi ah ee Pro, iyadoo antenna loo isticmaali karo GPS geodetic. Waxa uu lahaa qof qaraabo ah oo lagu magacaabo CE, kaasoo ka soo baxay Windows CE, iyo sida aan u maqlo, CX-daasu ma soo bandhigin madax xanuunkaasi.
Khariidadda 6 Mobile, tani waa line cusub, Waxan ka hadlay arintan dhowr jeer. In ka badan ama ka yar ayaa u dhigma Juno ee Trimble, inkasta oo ay ka badan tahay qiyaasta. Ma noqon karo saldhig, kaliya rersiga iyo waqtiga dhabta ah waa navigator guji oo leh astaanta 3 ilaa mitirka 5.
Maxaa cusub ee PM3
Tani waxay keenaysaa hawlaha la midka ah Pro iyo CX, taas oo ka duwan 6 oo soo saarta Khariidadaha Moobilada, kamarad, kulayliye iyo pickets. Kuwa kuwa tijaabiya Pro, waa mid aad u fudud sababtoo ah habka hawlgalka waa isku mid, fududaynaya tallaabooyin badan oo ka mid ah menu, kaas oo ku daray kumbuyuutarka iyo shaashadda taabashada waxay ka dhigeysaa wax soo saar badan. Taageerada soo dhawaynta RTK iyo saameynta, Ma hubo haddii ay taageerto codsiyada kale, sida ArcPad, kaasoo sameyn kara MM6. Dabcan, awoodaha software-ka ee aad soo qaadato (Sahaminta degdegga ah) ma barbardhicin Mapping Mobile, marka la eego qaabeynta, bandhig-tilmaameedka iyo madax-xanuun kale.
Sida Pro, waxay noqon kartaa saldhig ama rover, waxaa la iibsaday laba-labo iyo ku yimaadaan bac-gacmeed dhab ah. Mid kasta oo ka mid ah antenna, waqtiga dhabta ah waxa uu helayaa astaamaha astammalka (waxa uu ku guuleystay dib u soo celinta). Ka tegidda mid ka mid ah saldhigga ayaa siin kara saadaamarka mitirka, sidoo kale xogahan asaasiga ahi waxay keeni karaan in MM6 ay timaaddo submittresas sida lagu muujiyay layliga hore.
Qalabka waxaa ka mid ah qalab si loo dhigo on tripod, mid kale si ay u taageeraan on cantoobada iyo sidoo kale koox si ay u hagaajiyaan gacanta; qiyaas cajalad leh si aad u qaadato dhererka anteenaha, adareegyada noocyada kala duwan ee isku xirnaanta USB / Serial. Waxyaabaha kale, kabaha ah antenna, qalab kala duwan oo loogu talagalay hadda, kaarka SD iyo bacda biyaha aan shaqeyneynin.
Batteriga wuxuu ka mid yahay lithium, oo leh saacado badan oo saacado ah, oo ka sarreysa kuwa horay loo isticmaalay ee AA; iibsashada labada nin waxay yimaadaan bar ah oo faa'iido leh inay ku meeleeyaan xaalado isku mid ah marka ay ka shaqeynayaan "joojin iyo tag" hab. Waxay u keenaan barnaamijka si ay u sameeyaan ka dib wax-qabadka Mobile Mobile Office, 3.4 oo hore u taageertay xogta raajada, isdhexgalka xogta Mapinfo, shp, dxf iyo csv; sidoo kale codsi kale oo la yiraahdo "GNSS solutions", oo ay ku jiraan awoodda qorshaynta sahan. Codsigan ugu dambeeya wuxuu leeyahay wax aad u macquul ah, oo leh fursado jiiditaan iyo kala-tegid ah, warbixinno iyo isugeynta isugeynta.
Kuwa ugu wanaagsan ee accessories, DVD leh fiidiyowyo ku qoran Isbaanish, adigoo arkaya waxaad badbaadin kartaa naftaada wax akhriska badan oo fahamsan habka ficil ahaan sida uu u shaqeeyo; inkastoo buuggani uu aad u faa'iido badan yahay. Fiidiyowgu wuxuu ku fiican yahay tababarka, oo ka mid ah qayb ka mid ah sharaxaadda sida qalabka dayax-gacmeedka u shaqeeyo iyo dhinacyada saameeya soo dhawaynta. Waxa kale oo ku jira mawduucyada:
Soo bandhigida kooxda
Horudhaca hawlgalka GPS
Sidee loo sameeyaa xajinta hantida
Jooji oo tag masruufka iyo jimicsiga
Nidaamka baaritaanka goobta
Isticmaalka Xafiiska Maareynta Mobile iyo Xafiiska Kale ee Barnaamijka
Qabashada iyo maareynta xogta GIS
Sicirada, waxay kuxirantahay iibiyaha maxaliga ah, markaa waan la tashaday deegaankayaga, Mobile Mapper Pro ayaa ku socday US $ 1,500, MM6 wuxuu ku socdaa wax ka yar 1,200 iyo Promark3 meel u dhow $ 6,000 $. Ma aha xumeyn haddii aad u maleyneyso in aad ku gaari karto saxnaansho mitirka, noocyada kale ma bixiyaan qalab sida tan qiimaha.
Haddii aan u barbar dhigo kombiyuutar kale, waxaa la odhan karaa waxay u dhowdahay sida Trimble GeoXH, inkastoo aysan si sax ah u dhigmin.
Aynu yeelno koorso Toddobaadkan dhammaadka leh guurka laga bilaabo wadarta guud iyo qaar ka mid ah saaxiibada doonaya barashada bilaashka ah. Waxaan daneyneynaa inaan isku dayno qaar ka mid ah dhinacyada sida:
Xaqiiqooyinka noocan oo kale ah waxay ku jiraan shuruudo la mid ah qalabka la heli karo ee degmooyinka: MMPro iyo MM6, marka la barbardhigo RTK ee labo Promark3.
Waxyaabaha qiyaasta ah ee la gaari karo waqtiga dhabta ah iyo sida ay u shaqeyneyso waxay noqon doontaa in la bilaabo shuruudaha la midka ah Garmin Legend ee hantida ka weyn 3 hektar.
Xaqiiqda lumitaanka saxnaanta waa meelo fog: Mitirka 100, hal, saddex iyo 6.
Isla mar ahaantaana, hal mar iyo dhammaanba waxaan isku dayi doonaa mitir masaafo ah, in fekerkeyga, ay bedeli karto suunto ku dhawdahay haddii uu yahay mid ku filan, oo ku filan magaalooyinka. Iyadoo lagu saleynayo imtixaannada waxaan go'aansan doonaa sida loo xoojiyo dadaalka sahanka miyiga oo naga qaadi doona bisha Juun ilaa Sebtembar.
Waan arki doonaa sida ay u socoto.
Post Previous«Previous Safarka Mine Entremares
Post Next Khilaaf Version Office MobileMapper iyo MobileMapper Office 6Next »
47 Jawaab ayaa ku socota "GPS Gadiidka 3, aragti hore"
Xasuusta 3 ayaa waxay ubaahan tahay in ay shaqeyso, waxay ka cabsanaysaa inay aragto joornaalada kala duwan.
Massimo isagu wuxuu leeyahay:
Ho bisogno di un promark3 kontaroolaha la fastsurvey e badbaadin halkii guulaha 4.0 ripomax yahoo.it paypal pay mahadsan URGENT u diray italy
Andres c isagu wuxuu leeyahay:
Waa hagaag, waxaan haystaa 'Proff 3 Magellan' waxaanan ku noolahay Medellin Colombia; Xagee ku hayn karaa oo cusboonaysiin karaa qalabka?
ama qofka aan la xiriiri karo inaan u diro dal kale sababtoo ah waxaan la shaqeeyaa kooxda, si degdeg ahna looma baahna
Waxaan sugi doonaa jawaabtaada
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aan u muuqanayo sawirka shaashadda gps-ku waxay ku ballaarineysaa 3 magellan xuddunta
RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahnahay inaan ogaado sida loo xakameynayo ROBER IYO KALA DOORAN, iyo SIDA LOOGU TALAGALAY DADKA MAGELLAN PINA WINDOWS 8.1
MIYAAN U BAAHAN TAHAY IN AAD OGAATO HADDII AAD soo bixi kartaa qodobbo ku jira DAAQADAHA 8 GPS iyo reserved ROBERT IYO SALDHIGA Hana ka mid Noqonina QOF II CAAWIN KARAA FADLAN
pedro gomez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan heystaa 220 garsoore gps tan dib u noqoshada iyo hadda markaan u jeesto waxa aan ku dhaafin shaashadii kowaad sida aan sameyn karo
JUAN MANUEL CAMACHO ARMENTA isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan xiiseynayaa qalabka xaaladahan laakiin waa muhiim in la helo macluumaad dheeraad ah sida loo barayo, laakiin sidoo kale koorsada yar ee ay bixiyaan, Waxaan sidoo kale doonayaa in aan ogaado inta ay kharashka, cusub ama cusub, mahadsanid horey u soo mahadceliyay macluumaadka.
walter amezquita isagu wuxuu leeyahay:
hello Waxaan jeclaan lahaa in aan wax badan ka ogaado waqtiga kooxdaada isticmaalka, faa'iidooyinka iyo haddii aad awoodi kartid sawirro dheeraad ah ee qalabkaaga iyo wixii ka sarreeya qiimaha
dario isagu wuxuu leeyahay:
WAXA AAD KA HELI KARAA SHARCIYADA 3 SHARCIYADA. HADDII AAD U DIYAARINAYO IYO HADDII AAD U BAAHAN TABABAR AYAA LAGA HELAYSAA LACAGTA, WAA BILAASH AH. PRICE WAXAA LAGA HELAY. Waxaan ku qulqulay COLOMBIA. email: fotopacho1hora@yahoo.es
Waxaad taas ku sameyn kartaa shirkadda Topcon / Magellan ee dalkaaga.
Waxaan kuu soo jeedinayaa in aad si fiican u tagto Map Mobile 100 ama wax la mid ah maxaa yeelay Promark3 waa taxane ah oo aan mustaqbal lahayn qeyb ka mid ah Magellan.
abraham barahona brown isagu wuxuu leeyahay:
xiisaha mustaqbalka ee iibsanaya gps promark 3 rtk ah oo dhan oo dhan accessories thanks.
Robinson Vargas isagu wuxuu leeyahay:
Salaan Waxaan haystaa lamaane PMK3 (bilaha 8 ee isticmaalka) leh qalabka, barnaamijka iyo tababarka. Waxaan ku jiraa Bucaramanga (Sder-Col) qiimaha 11'000.000 (Colombian Pesos).
jc zemernot isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan haystaa 3 balanqaad ah, waxaanan xaday antenna, ulka iyo fiilooyinka, waxaan jeclaan lahaa in aan soo sheego waxyaabahan si ay u bartaan jilbaha sababtoo ah waa wax aan lagama maarmeyneynin shaqadayda. mahadsanid.
Ma qaybinayno qalabka ama alaabta.
Waxa ugu fiican ayaa ah inaad ka soo xigato shirkadaha wax iibiya ee dalkaaga jooga. Mararka qaarkood waxaan la xiriirnay shirkad wax iibiya, dalal aysan jirin ama aan firfircoonayn sida ay tahay arrinta Kolombiya. Laakiin waxay ahayd kiisas gaar ah.
Galab wanaagsan, waxaad soo jeedin kartaa taleefanka anteenada qalabka 3
Waa maxay wadankee?
Adalberto Barrera Castan isagu wuxuu leeyahay:
halkaas oo aan ku heli karo dvd oo leh fiidiyowyo af-isbaanish ah oo laga isticmaalo adeegsiga 3, waxaad ka iibin kartaa ii iiga mahad celin badan macluumaadkaaga adigberto barrera castan
Waxaan u maleynayaa inaysan Colombia ka jirin shirkadda loo yaqaan Ashtech. Waxaad u baahan doontaa inaad hesho alaab-qeybiye ku dhow, laga yaabee Panama ama Venezuela.
Promark 3 waa kombiyuutarka la joojin doono, markaa waxaan kugula talinaynaa inaad eegto fursadaha cusub sida Promark 100 ama Mobile Mapper 100
Waxaan rabaa in aan ogaado qiimaha balanqaad 3 waxaan ku suganahay Colombia iyo halka aan ka heli karo
Waxyaabaha ugu fudud ayaa ah inaad ka hubsatid bixiyaha Thales ee xaafaddaada
FERNANDO LOPEZ LOZADA isagu wuxuu leeyahay:
WAXAAN U BAAHAN YAHAY SAARKA GPS ANTENNA MARK PROMARK3 QALBIGA COLOMBIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Waxaan u baahanahay isweydaarsiga GPS ANTENNA MARK PROMARK3 THALES COLOMBIA
sare isagu wuxuu leeyahay:
Hi .. Waxaan jeclaan lahaa in la ogaado waxa GPS (trimble-asttech) Waxaan ku talinaynaa in si sax ah loo cabbiro dalka, waxaan ku noolahay muuqaalka guud ee dhulka Colombia ee waa mid aad u xoqdo, waxaa jira geedo badan si dhaweynta satellite ma aha kuwa ugu fiican, laakiin waxaan doonayaa in la sameeyo kuwaas oo qaadaa oo la GPS submeter natiijooyinka aan sida haddii qiyaastay saldhiga a total (waa in saxnimada kala duwan dhinacyo badan oo aan marnaba sax ah GPS noqon doonaa siman tahay tan of idaacad, laakiin waxaan jeclaan lahaa in la ogaado waxa uu helo dhow, waxa waa sax, mahad
Ma haysto wax ku saabsan waxa aad qabaneyso.
Laakiin marka aad iibsanayso qalabkaas, waxaa jira fiidiyowyo ku sharaxaya asaasiga.
JUAN JIMENEZ isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan iibsado labo ka mid ah qalabka 'Promark 3', howlgalka RTK, softiweer iyo dhammaan waxyaabaha kale, haddii aad leedahay tababbarka si aad u ogaato sida ay u shaqeyso. Habka lacag bixinta Waxaan joogaa Venezuela.
Juan Alejandro Garzon Pitta isagu wuxuu leeyahay:
Salaan, waxaan u baahanahay inaan iibsado hal GPS-ka ah ee loo yaqaan '' Promark 3 Thales ', nooca L1, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado qiimaha, kaliya GPS ayaa loo baahan yahay, qodobbada kale maahan. Waan ka mahadcelinayaa iskaashigaaga.
Hagaag, way adag tahay in la ogaado, waxa ugu aaminka badan ayaa ah in fiilada ay waxyeello ka soo gaarto meesha ay ku xiran tahay, sidaa darteed waxay lumisaa seenyaalaha markii la qabanayo. Aad bay u daciif yihiin.
Gaar ahaan waxa aan u muuqday Stop aad wax ku ool ah iyo hab Tag, maxaa yeelay, signalka si fudud ku waayay meelo la caqabado ama dhul aan sinnayn.
Walter isagu wuxuu leeyahay:
Salaan, su’aal ahaan waxaan u baahnaan lahaa inaan ogaado sababta 3 u balanqaado markaan isticmaalayo oo aan sameynayo labadaba sahamin kinematic iyo joojiyo oo iga digtoonow "xiriir luminta" iyo "ma diiwaan gelin karo xiriiriyaha anteeno dibadda" ama wax la mid ah . Markasta oo ay taasi dhacdo waqtiga soo dejinta xogta kumbuyuutarka my dhibcaha dhibicda waa kuwo aad u barokacsan marka loo eego kuwa laga nasto. mahadsanid! ka yimid Argentina
Waxaad ku soo aruurin kartaa xogta hal, ka dibna Barnaamijka Postprocess (Mobbile Mapper Office) waxaad ka sameyneysaa boostada oo ku saabsan saldhigyada Rinnex ee laga heli karo internetka. Dhibaatada ayaa laga yaabaa inay tahay inaadan helin saldhig aad ugu dhow aagga sahankaaga.
alvaro graham isagu wuxuu leeyahay:
salaan cordial Waxaan hadda haystaa balanqaad'XXX 'oo waxaan rabaa inaan ogaado haddii aan ku sameyn karo sahan topografi to mid ah waan ogahay in lagu qaban karo sida "Cartgafria" laakiin ima siinayso kor u qaadista, sahanka aan ubaahanahay uma baahna saxnaan oo waxaan rabaa in aan ku sameeyo dib-u-dhigis, waan ku mahadsantahay waad tusi doontaa sida Waan ku samayn karaa mahadsanid Alvaro Graham
Haddii ay doonayaan dalab, waa inay ka baxaan dalka ay ku nool yihiin.
Xidigga Sevilla Ronal Zamora isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan doonayaa in aan ogaado haddii aad iigu heli karto xarig taleefishin dibedda ah ee khariidadda mobile iyo sababtoo ah
Tusaale ahaan waad soo xigan kartaa ProMark3 oo aad siin kartaa liis-garayn qaar ah
Anigu waxaan ahay dhismaha
Waa maxay emailka Roger Hernandez? ka tago calaamadaha qaarkood si aad u aragto waxa la sameeyo cable-kaaga
Salaamo .... sideen u heli karaa barnaamijka sahan ee FAST ee Isbanishka? Waxaan sugaa jihooyinka aan ku soo diro boostada ... mahadsanid
Hi Joh, Waxaan kuu soo direy codsigaaga una diri kartaa wakiilka Magellan si aad ula xiriirto.
Jon isagu wuxuu leeyahay:
subax wanaagsan waxaan jeclaan lahaa in aan soo sheego dhowr gps oo gps promontory 3, si ay u iibsadaan sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagal ah .... ... waad ku mahadsantahay
Hagaag, si fiican bay u dhacday, waxaan rabaa in aan waqti qaato si aan u qoro natiijooyinka. Marka laga reebo diiwaangelinta khaladaad caadi ah oo ku saabsan adeegsiga qalabkan.
Granec isagu wuxuu leeyahay:
Oo sidee bay u dhacday? : -S
Hi Luis, waa maxay waddanka aad ku jirtaa, si aad u ogaato nooca loo qaybiyo inuu kuu soo diro.
Waxaan u baahanahay inaan iibsado qalab dhamaystiran isagu wuxuu leeyahay:
Fadlan soo xigso sida ugu dhakhsaha badan
Waxaan email u diri jiray qof taageeri kara Colombia, maadaama ay u egtahay sida iminka loo qaybiyo dalkaas aan la heli karin.
ROGER HERNANDEZ isagu wuxuu leeyahay:
DHAQAALAHA Wanaagsan. FADLAN waan ku faraxsanahay in aan ahay ANTENNA CABLE oo loo yaqaan 'PROMARK 3 THALES GPS' iyo intee in le'eg ayey u sameyneysaa si looga helo BOGOTA-COLOMBIA
WAXAAD U QAADASHAA DARYEELKA DARYEELKA.
FADLAN WAXAAN U BAAHAN TAHAY IN AAD U BADAN.